Lego ငါးခု Marvel Spider Lair ပေါ် 76175 Attack အစားဝယ်ယူရန်သတ်မှတ်
Lego ငါးခု Spider-Man Spider Lair ပေါ် 76175 Attack အစားဝယ်ယူရန်သတ်မှတ်
09 / 03 / 2021 09 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1081 Views စာ0မှတ်ချက် 4855 Spider-Manရထားကယ်ဆယ်ရေး, 76004 Spider-Man: ပင့်ကူ - သံသရာ Chase, 76057 Spider-Man: Web Warriors Ultimate Bridge စစ်ပွဲ, 76171 မိုင် Morales Mech သံချပ်ကာ, 76174 Spider-ManMysterio vs. 's Monster Truck ကား, 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု, အုတ်ခဲ, Lego, Lego Marvel, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Spider-Man, LEGO.com, Marvel, Spider-Man, Spider-Man 2, Tobey Maguire, အဆိပ်
ငါတို့ကဲ့သို့ငါတို့မူကားထိုနိမ့်ကျသောနိဂုံးကိုရောက်လေပြီ Lego Marvel 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု ပလတ်စတစ်အလေအလွင့်များ၊ စိတ်မပူပါနဲ့။ ဒီနေရာမှာအများကြီးပိုကောင်းပါတယ် Spider-Man သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံဖြုန်းနိုင်အစုံ။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့၏ထဲမှာဖတ်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ In-depth (နှင့်အပြစ်တင်) ပြန်လည်သုံးသပ် of 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုကျွန်ုပ်တို့သည် Web-slinger ၏နောက်ဆုံးထွက်ခရီးကိုအလွန်ကြီးမားသောပရိသတ်များမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်မပြီးဆုံးသေးသည့်အပြင်တည်ဆောက်ရန်အတွေ့အကြုံမရှိ၊ စကားပြောရန်တည်ဆောက်စရာအတွေ့အကြုံလည်းမရှိ၊ Venom သည်အခြေခံအားဖြင့်ထာဝရသွားရန်လိုသည်။
ဒါပေမယ့်ဒါကကြမ်းပြင်ပါပဲ Lego Spider-Man သင်၏ခြေထောက်ပေါ်သို့ဆွဲထုတ်ရန်အနည်းဆုံးအစုံများစွာရှိသည်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ရပ်ကွက်တစ်ခုအတွက်ဈေးကွက်ထဲရောက်နေတယ်ဆိုရင် Lego ၀ ါသနာကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်လိုစိတ်မရှိသောမော်ဒယ်လ်သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များကိုလေ့လာပါ။ အချို့သောအရာများသည်ယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်သည်။ အချို့သည်သင်စျေးကွက်ထဲသို့ရောက်သွားနိုင်သည်။
5 - 76004 Spider-Man: ပင့်ကူ - သံသရာ Chase
သင်တစ်နည်းနည်းနဲ့သေးသေးသေး Venom ကိုပိုင်ဆိုင်မထားဘူးဆိုရင် (သူ့ကိုထင်ရသောတိုင်းအတွက်ပေါ်လာနေသော်လည်း Lego Spider-Man အချိန်ကတည်းကစတင်သတ်မှတ်ထားသည်ဖြစ်လျှင်၊ သင့်အနေဖြင့် symbiote လုံးဝပျောက်ကွယ်မသွားသည့် ၂၀၁၃ သို့ပြန်သွားရန်ပိုကောင်းသည်။ Lego ၇၆၀၀၄ တွင်သူ၏ပထမဆုံး (နှင့်ပွဲတစ်ပွဲအကောင်းဆုံး) အသေးစားဓာတ်ပုံကိုကောက်ယူရန်အုပ်စုသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးခဲ့သည် Spider-Man: ပင့်ကူ - သံသရာ Chase ။
Spider-Cycle ကိုယ်နှိုက်သည် Sony ၏ Venom ရုပ်ရှင်တွင်မြင်တွေ့ရသည့်မြင်ကွင်းများကဲ့သို့မှတ်သားလောက်ဖွယ်အမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်သည် (ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ပြီးပြီ၊ ရုပ်ပုံ၏ညာဘက်နေရာတွင်ရှိသည်)၊ သို့သော် Nick Fury ၏ပျံသန်းသောကားသည်အစောဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် ၏ Lego မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအုပ်စု၏အကြိုက်ဆုံးစက်ပြင်: ဘီးသည်မြေပြင်တလျှောက်မောင်းနှင်ခြင်းသို့မဟုတ်လေထုထဲတွင်ပျံဝဲခြင်းကိုတုပရန် ၉၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်။
Venom ၏အပင်၏စပျစ်နွယ်ပင်တဲများတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဒြပ်စင်အသစ်များထက်သူ၏ဆိုးယုတ်သောပုံစံပြောင်းလဲခြင်းပုံစံနှင့် ပို၍ တော်သင့်သည်ဟုခံစားရသည် 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုဒါကအဓိကအားဖြင့်သူကသူတို့ကိုကြီးမားတဲ့ p နှစ်ခုလိုလက်ထဲမှာလှည့်ပတ်စရာမလိုတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်arty ပူဖောင်းများ
4 - 76174 Spider-ManMysterio vs. 's Monster Truck ကား
အိုကေ၊ ကြည့်ပါ၊ ငါတို့ရပြီ။ အချိန်နှင့်နေရာတစ်ခုရှိသည် Spider-Manအဆန်းတကြယ်ဆုံးအစွန်းများ - ဤသည်ကာတွန်းစာအုပ်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပြီး spandex တွင် ၀ တ်စားဆင်ယင်ပြီးအဆောက်အအုံများကိုလှည့်ပတ်နေသည်။ 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု.
ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်လည်းအဲဒါကိုရလိမ့်မယ် 76174 Spider-ManMysterio vs. 's Monster Truck ကားကုန်ကျစရိတ်၏သုံးပုံနှစ်ပုံထက်နည်းသောထူးခြားသည့်အသေးစားပုံစံများပါ ၀ င်သည့်နောက်ထပ် ၂၀၂၁ အစုံ။ အယူအဆတစ်ခုအနေနှင့်ပေးကမ်းခြင်းထက် ပို၍ ပင်ရယ်စရာကောင်းသည် Spider-Man သူ့ကိုယ်ပိုင် Batcave, ဒါပေမယ့်သေဒဏ်စီရင်လည်းလမ်းပိုမိုပျော်စရာပါပဲ။ ဘယ်သူကနဂါးကုန်တင်ကားတွေကိုမကြိုက်ဘူး၊
ထို့အပြင် Venom ၏အရိပ်အမြွက်မမြင်ရပါ။ ချမ်းသာ။
3 - 4855 Spider-Manရထားကယ်ဆယ်ရေး
Spider-Man အမှန်တကယ် p ဖြစ်ခဲ့သည်art ၏ Lego Tobey Maguire သည်သူ၏ပစ္စည်းပစ္စယများကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပိတ်ဆို့နေချိန် မှစ၍ ၎င်းသည်မြင်ကွင်းတစ်ခုမှလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်စွာခြေရာမချမီ Spider-Man ၃။ (ငါတို့ဆိုလိုတာကိုမင်းသိတယ်။ ဒါကိုထားခဲ့ရအောင်။ )
သငျသညျအဟောင်းကျောင်းကိုကန်ဖန်စီလျှင်, သင် 4855 ထက်အများကြီးပိုဆိုးလုပ်နိုင်ပါတယ် Spider-Manတ ဦး တည်းယူသော 's ရထားကယ်ဆယ်ရေး Spider-Man2ရဲ့အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းများနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးများထဲမှဆောင်တတ်၏ Spider-Man ယနေ့အထိအသေးစားဓာတ်ပုံများ၊ Doc-Ock (အနည်းဆုံး ၂၀၀၄ တွင်)၊ ဂျေယောနဂျိမ်းဆန်နှင့်မြေအောက်ရထားတစ်စီးတို့နှင့်အတူ။
၎င်းသည် aftermarket တွင်စျေးသိပ်မကြီးသော၊ အသုံးပြုသောမိတ္တူတစ်ခုနှင့်အတူတူနီးပါးတိုက်ဆိုင်သည့်ဈေးနှုန်းနှင့်ဆင်တူသည် 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု လက်လီအရောင်းဆိုင်တွင် သင်ယခုခန့်မှန်း။ မရပါကကျွန်ုပ်တို့၏ငွေကြေးသည်မည်သည့်နေရာတွင်ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။
2 - 76171 မိုင် Morales Mech သံချပ်ကာ
ဘဏ်ကိုချိုးဖောက်သည်ဟုမခံစားရပါ၊ Spider-Man minifigures ... ကောင်းပြီ, တော်တော်များများအစဉ်အဆက်? မပြောပါနှင့်: 76171 ရုံအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်မိုင် Morales Mech Armor ဖမ်းပြီး Lego ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အလွန်တိုးတက်လာသည်ဟုထင်ရသောဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်သည့် mechs အမျိုးအစား
၎င်းသည်အများအားဖြင့်သူတို့၏အသေးအမွှားပုံသဏ္byာန်များကြောင့်သို့မဟုတ် ၇၆၁၇၁ Miles Morales Mech Armor တွင်ပါဝင်သောအက္ခရာတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံအားဖြင့်အခြားအရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းထားသည်။ Marvel အရှက်ကွဲဖို့ minifigures ။ Miles တွင်ပါးလွှာသောဒြပ်စင်အသစ်၊ ပုံနှိပ်ထားသောကိုယ်ထည်အသစ်နှင့် dual-molded ခြေထောက်များရှိသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအစုတစ်ခုအတွင်း (ပေါင် ၈.၉၉ / ဒေါ်လာ ၉.၉၉ / ယူရို ၉.၉၉) တွင်ဘောင်းဘီတိုတစ်ချပ်ထက်လျော့နည်းနိုင်သည်။
အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်တိုင်ကမည်သည့်ဆုကိုမျှရရှိမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်အစုံအနည်းငယ်သည် ၁၂၅ ခုသာအတွင်းတွင်လုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အသေးစားပုံသေပေးသည့်စနစ်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု။ ယူကေမှာပေါင် ၆၉.၉၉ ကျသင့်တယ်။
1 - 76057 Spider-Man: Web Warriors Ultimate Bridge စစ်ပွဲ
အားလုံးဆိုပါစို့ Lego Spider-Man အစုံဒီကဲ့သို့ကောင်းသောကြည့်ရှုကြ၏။ မင်းတို့ပြောတာထက်ပိုပြီးမြန်မြန်ကွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်။ အိုတကယ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ Lego Marvel'' s ကို Spider-Man subtheme က 2016 နှင့်အတူ 76057 ခုနှစ်တွင်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပါတယ် Spider-Manဖြေ - War Warriors Ultimate Bridge စစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊
ကျေးဇူးတင်စရာမှာလူအများအပြားက BrickLink လက်လီအရောင်းဆိုင်များအောက်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သောနယူးယောက်မြင်ကွင်း၏ဤနီးကပ်လှသောအပိုင်းအစကိုကောက်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်က Spidey မူလအိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီးမိတ္တူ ၂ ခု (သို့မဟုတ်သုံးခုပင်) ကိုပေါင်းကူးတံတားကြီးတစ်ခုသို့ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ Spider-Manလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကမှမတူကွဲပြားတဲ့ Venoms 15 မျိုးကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအကြားလျှင်, တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာသော်လည်း 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု နှင့်အခြေခံအားဖြင့်အခြားမည်သည့် Lego Spider-Man set, မင်းတကယ်မှားလို့မရဘူး သင် Stealth Suit ကိုအလွန်လိုချင်သည်မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအသေးစားပုံစံဖြစ်သည်။ £ 70 paywall နောက်ကွယ်တွင်သော့ခတ်ထားသည့်အရာ၏အခြေခံအဖြစ်ဖွဲ့စည်းရန်ရုန်းကန်နေရခြင်းမှာ ၀ မ်းနည်းစရာဖြစ်သည် Lego အစုံဖြစ်သင့်သည်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ကောက်နေခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Marvel ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဆိုတ ဦး တည်းကိုအသုံးပြုပြီးအစုံ တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO NINJAGO 71738 Zane ၏ Titan Mech Battle ၏ရှေ့ပြေးပုံစံကိုပြသခဲ့သည် LEGO House
LEGO က၎င်းသည်၎င်း၏နောက်ခံမှအနက်ရောင်နောက်ခံများမှဝေးကွာသွားခြင်းကိုအတည်ပြုသည် →